Export Photoshop sosona amin'ny alàlan'ny fisie tsirairay | Famoronana an-tserasera
Photoshop dia misy a fitaovana fanitsiana sary, izay manome ny mpampiasa azy fahafahana hampiasa safidy maro, izay amin'ny tranga sasany dia matetika no hita "Zavatra tsyEo afovoan'ny menus maro ao aminy.
Amin'ity lahatsoratra ity dia tianay ny hanazava anao amin'ny antsipiriany ny fomba fiasan'ny iray amin'ireo safidy misy amin'ny Photoshop ary miresaka momba ny safidy an'ny sosona fanondranana mankany amin'ny fisie.
1 Ianaro ny fomba fanondranana sosona Photoshop amin'ny alàlan'ny fisie
2 Ahoana no ahafahanao manondrana sosona tsirairay
Ianaro ny fomba fanondranana sosona Photoshop amin'ny alàlan'ny fisie
Mety manontany tena ianaoinona no azo ampiasaina an'ity safidy ity?? Raha mampiasa an'ity safidy ity ianao dia ho afaka manondrana tsirairay ny sosona izay ananan'ny antontan-taratasy amin'ny karazan-drakitra samihafa toy ny PSD, JPG, PNG, BMP, ankoatry ny hafa. Mba hahazoana fidirana amin'ny safidy hanondranana sosona amin'ny rakitra, ilaina ny mandeha amin'ny File, tsindrio ny Script ary avy eo Export sosona amin'ny fisie.
Ny fanatanterahana an'io baiko io dia hisokatra avy hatrany a boaty fifampiresahana izay hisehoana ireo safidy hafa, izay hazavainay amin'ny fomba tsara kokoa etsy ambany:
toerana halehany: Ity no làlana itehirizana ny rakitra tsirairay aorian'ny fanondranana azy.
Awana anaran'ny rakitra: Izy ireo dia ahitana ny prehf izay hananan'ny fisie rehetra aondrana, toa ny Icon, Icon-1, Icon-2, sns.
Sosona hita maso ihany: Ity no boaty milaza ny Photoshop raha tadiavin'ny mpampiasa haondrana ny sosona tsirairay na raha ireo izay hita maso ihany no tadiavinao, izany hoe, ireo sosona izay manana ny kisary maso napetraka.
Kilasy fisie: Amin'ity safidy ity, ny mpampiasa dia misafidy izay endrika tadiavin'izy ireo haondrana ny sosona tsirairay avy, na amin'ny PNG-24, PNG-8, JPG, na hafa.
Ampidiro ny mombamomba ny ICC: Ity no safidy ilazanao raha te hampiditra mombamomba ny loko ICC ao amin'ireo sosona aondrana ianao.
Safidio ny safidinao safidio: Izy io dia misy ny safidy izay hiseho ireo safidy hafa fanampiny arakaraka ny karazana endrika nofidinao.
Run: Io no safidy anaovana ny baiko ary koa ny sosona tsirairay dia aondrana any amin'ny rakitra ihany.
Ahoana no ahafahanao manondrana sosona tsirairay
Fantatrao izao hoe inona ilay safidy azo alaina ao amin'ny endri-javatra Export Layers manoloana ireo rakitra sy izay ilana azy ireo, fotoana izao hanombohana hampihatra izany.
Noho izany, azonao atao ny misafidy ny hampiasa antontan-taratasy izay ahitanao sary masina ao anaty antontan-taratasy tokana, azonao antoka fa mieritreritra ianao fa ny fanondranana tsirairay tsirairay avy dia tsy isalasalana fa ho asa tena mandreraka ary mety ho marina izany, na izany aza ary amin'ny alàlan'ity asa ity, azo atao ny manao ity asa ity ho tsotra kokoa.
Raha vantany vao azonao ny antontan-taratasy sy kisary ao anaty sosona iray, tsy maintsy tsindrio ny File ianao, avy eo tsindrio Script ary farany Export sosona amin'ny rakitra, toy izao hiseho avy hatrany ny boaty fifampiresahana izay tsy maintsy hampifanarahinao amin'ny fomba tianao ahondrana ireo sarinao.
Raha mila ianao dia afaka mametraka sary masina ka ny tsirairay amin'ireo sosonao dia haondrana amin'ny endrika PNG-24, JPG, sns. ary misafidy ny hamonjy ny mangarahara rehetra. Toy izany koa, azonao atao izany kitiho ny boaty fanondranana ny sosona hita maso ihany, mba hanafenana ireo sosona izay tsy tianao aondrana.
Raha manaraka ireo dingana ireo ianao dia hanao fanondranana ny sary masina tsirairay Izany dia ao amin'ny antontan-taratasinao tsotsotra. Satria io dia momba fiasa Photoshop tena ilaina, izay tsy isalasalana fa tokony ho fantatra sy hampiasan'ny olona maro kokoa, satria manome ny fahafaha-mitahiry ezaka sy fotoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Export Photoshop Layers Amin'ny alàlan'ny fisie tsirairay